LAASCAANO(P-TIMES) – Taliyaha guud ee ciidamada Somaliland Jeneraal Nuux Taani Ismaaciil ayaa kormeero shaqo saaka ku tagay deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland oo horey ugu dagaalamay bilowgii sannadkii lasoo dhaafay ee 2019-ka, waxaana uu kormeeray rugaha ciidamada Somaliland.
Wararka ayaa sheegaya in safarka Nuux Taani uu daaranaa arrimaha ku wajahan xiisaddo maalmihii u dambeeyey ay ciidamo gaar ah kasameynayeen aagaga Barriga ee gobalada Somaliland.
Taliyaha oo la hadlay ciidamadaas ayaa u sheegay in ay halkaas u joogaan howlo la xariira sugida Ammaanka ee gobalada Somaliland, wuxuuna sheegay in aysan cidna weerar ku aheyn oo aysan ku qaadi doonin.
Sadex maalmood kahor ciidamada Puntland ayaa sameeyey dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan saldhigyada ay daganaayeen, waxaana taasi ay walaac ku beertay dhinaca Somaliland oo u arkay abaabulka duulaan dagaal.
Puntland ayaa laga qabsaday Tukaraq bilowgii 2018-kii, waxaana xiligaas ka dib dhacay labo dagaal oo dhinacyada dhexmaray kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah.
Ficilada cusub ee ay labada dhinac Puntland & Somaliland, ka wadaan gobalada Sanaag iyo Sool ayaa u muuqda kuwa keeni kara isku dhacyo cusub, inkastoo labada maamulba ay hoggaamiyaashoodu ku baaqeen nabad iyo wada hadal in agu dhameeyo khilaafka taagan.